Aqalka Sare ee Baarlamaanka oo ka doodaya Khilaafka Dowladda Federaalka iyo Maamul goboleedyada | SAHAN ONLINE
Aqalka Sare ee Baarlamaanka oo ka doodaya Khilaafka Dowladda Federaalka iyo Maamul goboleedyada
MUQDISHO – Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta dood ka yeelanaya khilaafka u dhaxeeya dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada kaasoo muddooyinkii u dambeeyey meel xun gaaray kaddib markii maamul goboleedyada ay sameysteen Gole u gaar ah.
Aqalka sare ayaa yeeshay kulan ajandihiisu yahay laba qodob oo kala ah khilaafka dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada,sidoo kale khilaafka ka dhex taagan maamulka Galmudg kaddib markii bishii lasoo dhaafat Xildhibaanada ay sameyeen xil ka qaadis iska soo horjeeda.
Aqalka sare ayaa muddooyinkii dambe u muuqday mid howl-gab laga dhigay shaqadiisa ayaa markii u horeysay soo faragelinaya khilaafka dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada oo rasmi ahaan Aqalka sare ku matalo Federaalka.
Maamul goboleedyada dalka ayaa ku eedeynaya dowladda Federaalka gaar ahaana Madaxtooyada iyo Xukuumadda inay faragelin ku hayaan isla markaana ku howlan yihiin Kacdoono siyaasadeed oo ka dhan ah Madaxda maamulada.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Madaxda maamul goboleedyada isugu yeeray shir 28-ka bishan Oktoobar ka dhici doona magaalada Muqdisho si khilaafka jira loo xaliyo.